Izakhamuzi zibhikishela ukulungiselela izizukulwane - Bayede News
Amashumi ezinkulungwane zabantu abhikishe eMyanmar ngeledlule esola ukuketulwa kombuso futhi efuna kukhululwe umholi waleli lizwe u-Aung San Suu Kyi (osesithombeni).
USuu Kyi wakhethwa ngokwedemokhrasi embhikishweni owawumkhulu kunayo yonke kusukela ngowezi-2007 lapho kwaba neSaffron Revolution okuyiyo eyasiza leli zwe ukuba lingene ezinguqukweni zentando yeningi. Osukwini lwesibili lwemibhikisho izixuku edolobheni elikhulu iYangon bezigqoke izikibha ezibomvu, ziphethe amafulegi abomvu kanye namabhelunde abomvu okuwumbala weqembu likaSuu Kyi iNational League for Democracy Party (NLD).
“Asifuni ukubuswa ngokuphoqelelwa ngezombutho! Sifuna intando yeningi!” kumemeza ababhikishi.
Kuthe ngeSonto ntambama amabutho aqeda ukungasebenzi kwe-inthanethi obese kwandisa ukudinwa kwababhikishi kusukela kuketulwa umbuso ngoMsombuluko odlule okwamisa izinguquko kuleli lizwe elinezinkinga eliseningizimu mpumalanga ye-Asia futhi kwaphazamisa uhlelo lwentando yeningi, kwadonsa nentukuthelo yamazwe omhlaba.
UPapa uFrancis uveze “ubumbano nababhikishi” ngesonto eledlule futhi wacela abaholi baleli lizwe ukuthi bafune ukuzwana ngentando yeningi.
Izibalo eziphezulu zabantu zibuthane edolobheni iYangon zagcwala imigwaqo ziqonde eSule Pagoda maphakathi nedolobha, okuyindawo lapho okwakubuthana khona ababhikishi bemibhikisho yangowezi-2007 nowe-1988 owawuholwa ngamaBuddha.
Kube nolayini wamaphoyisa ephethe amahawu okuvimba ababhikishi kepha awazamanga ukumisa umbhikisho. Abanye bababhikishi banike amaphoyisa izimbali, kuphinde kwavela elinye iphoyisa lishaya indesheni yeminwe emithathu.
Ababhikishi nabo bashaya indesheni yeminwe emithathu esiphenduke isithombe sokulwa nokuketulwa kombuso kuleli lizwe. Abashayeli bezimoto abebedlula bebeshaya amahuthi abasezimotweni baphakamisa izithombe zikaSuu Kyi.
“Asifuni ukubuswa ngokuphoqwa ngamabutho esizukulwaneni esizayo, ngeke siwuqede lo mbhikisho singawenzanga umlando. Sizolwa kuze kube sekugcineni,” kusho uThaw Zin oneminyaka yobudala engamashumi amabili.